सरकारी अस्पतालमा परीक्षण निःशुल्क गर - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home बिचार सरकारी अस्पतालमा परीक्षण निःशुल्क गर
अब सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्छ । यो जनसेवासँग सम्बन्धित गम्भीर विषय त हुँदै हो, सरकार हुनुको दायित्व पनि हो । पछिल्लो समयमा कोरोना महामारी संक्रमणको परीक्षण जनता आफंैले गर्ने भन्ने सरकारी निर्णयले जनतामा निराशा ल्याएको छ । यति मात्र होइन, सरकारप्रतिको भरोसामाथि यसले तुषारापात गरेको छ ।
यो निर्णय संविधानप्रदत्त जनताका मौलिक हक र अधिकारको विरुद्धमा छ । जनतालाई पनि थाहा छ, विश्व उदारीकरणका कारण नेपाल सरकार गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिजस्ता कतिपय महŒवपूर्ण कुरा आफूले सोचेअनुरूप निर्माण गर्न र परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर, राज्यका सबै अंग र निकायहरू निजीकरण पनि त भइसकेका छैनन् । आफ्ना मातहतमा रहेका अंग र निकाय सरकारको सोच, हैसियत र निर्मित नीति तथा योजनाअनुसार परिचालन गर्न सरकार किन असमर्थ छ ? जनसाधरणको दिमागमा यही कुराले घर गरिरहेको छ । के सरकार निजी संस्थाको एउटा अंग मात्र बन्न पुगेको हो ? के सरकारको काम भनेको निजी संस्था तथा एनजीओ र आईएनजीओले ल्याएका कामको सहजीकरण गर्ने मात्र हो ? के यो साँच्चिकै सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित हुन पुगेको हो ?
जनताका सेवाप्रदायकका रूपमा रहेका सरकारी अंग र निकायहरू हल न चलको अवस्थामा रहन पुग्दा यी विषय गम्भीर रूपमा उठ्न पुगेका छन् । यी सबै सरकारी नीति स्पष्ट नहुनाको कारण सिर्जना हुन गएका हुन् । सरकारले गैरसरकारी वा निजी निकाय परिचालनका लागि तदनुरूप निर्माण गरिएका ऐनकानुनद्वारा सम्झौता, सहमति वा समझदारीका आधारमा परिचालन गर्ने स्पष्ट नीति अख्तियार गरे पुग्छ । यसमा दुविधा पनि छैन र अनावश्यक आशा र रोइकराइको पनि कुनै गुन्जायस रहँदैन । तर, सरकारी संस्था, निकाय वा विभागहरू जनसरोकार र जनसेवासँग प्रत्यक्ष जोडिन गएका निकायहरू हुन् । यिनको काम भनेको जनसरोकारका कामलाई बढी सेवाप्रदायक र सुविधाजनक बनाउनु हो । यी निकायमा कार्यरत सबैको अभीष्ट भनेको अधिकतम जनसेवा हो । जनताले पनि यिनैबाट सेवा र सुविधाको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । यस्तो खुल्लमखुला र जानीमानी आएको विषयमा पनि वर्तमान सरकारको अलमल र दोधार किन दोहोरिइरहेको छ ? निजी संस्थाहरूले जनतालाई सेवा दिन नचाहेकाले सरकार र सरकारी निकायले पनि नदिने भन्ने वा निजीले मानेन्, त्यसैले सरकारले पनि गर्दैन भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा व्यवहारमा अभिव्यक्त किन भइरहेको छ ? यस्ता व्यवहार तत्काल सच्याउनुपर्छ ।
कोरोना महामारी आफंैमा सरुवा रोग हो । सरुवा रोग महामारीका रूपमा अंकित भएकाले उक्त रोगको उपचार सरकार आफंैले निःशुल्क गर्नुपर्छ । धनीमानी र सभ्रान्तहरू प्रायः सरकारी अस्पतालमा जाँदैनन् । सामान्य र गरिब जनता नै सरकारी अस्पतालमा बढी जाने हुन् । त्यसैले, त्यस्ता गरिब र विपन्न जनतालाई लक्षित गरी सरकारी अस्पतालमा कोभिडसम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षण र उपचार पद्धतिलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ ।
सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीलाई सरुवा रोगको वर्गीकरणभित्र राखी जनतालाई निःशुल्क सेवा देऊ भनी निर्देशन सुझाव दिनुपरिरहेको छ । जुन सुझावलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा पालना गर्न सकेको पनि देखिँदैन । त्यसैले, सरकार अब संवेदनशील बन्नैपर्छ र जनताको नजरबाट टाढा पुग्नका लागि जोगिइनुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा आफ्ना मातहतमा रहेका सरकारी अस्पतालमा कोरोना महामारी संक्रमणको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न÷गराउन सक्नुपर्छ ।
विदेश एजेन्सी - December 5, 2020 0
बिचार सुवास श्रेष्ठ - November 30, 2020 0
खेल राजधानी समाचारदाता - November 29, 2020 0
प्रदेश ७ सीपी लोहिया - December 2, 2020 0
सीमामा अलपत्र परेकालाई क्वारेन्टाइनमा राखिँदै
सिद्धराज भट्ट - March 24, 2020 0
धनगढी । नेपाल–भारतको सीमानाका गौरीफण्टामा सोमबारदेखि अलपत्र परेका नेपालीलाई सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।...
सुजीतकुमार झा - July 12, 2020 0
Not-to-be-missed एजेन्सी - March 19, 2020 0
Not-to-be-missed एजेन्सी - June 21, 2020 0
गरिबका लागि सलमानको सहयोग निरन्तर
Not-to-be-missed एजेन्सी - May 11, 2020 0
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सलमान खानले लकडाउनको समय मजदुरवर्गलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने काम रोकेका छैनन् । यसअघि उनले फिल्ममा दैनिक ज्यालामा काम गर्ने...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - October 15, 2020 0
गण्डकीमा एकै दिनमा अहिलेसम्मकै बढी संक्रमित पाेखरा । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार ३ सय ५६ पुगेको छ । बिहिबारमात्र १ सय ६९...
अर्थ सिपि लाेहिया - June 16, 2020 0
Exclusive राजधानी समाचारदाता - December 3, 2020 0